Xiddiga xulka qaranka Brazil ee Neymar Jr oo Guri uu dego ka raadsanaya Magaalada… – Gool FM
Xiddiga xulka qaranka Brazil ee Neymar Jr oo Guri uu dego ka raadsanaya Magaalada…
(Paris) 20 Juunyo 2019. Neymar Jr ayaa la soo warinayaa inuu guri ka raadsanayo Magaalada Barcelona ka hor inta uusan dib ugu laaban xagaagan garoonka Camp Nou.
Weeraryahankan ayaa labadii xilli ciyaareed ee ugu dambeeyey ku qaatay kooxda Paris Saint-Germain, waxaana uu wadar ahaan u dhaliyey 51 gool 56 kulan oo uu u saftay tartammada oo dhan.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jiray warar xan ah oo soo jeedinaya inuu Neymar dib ugu laabanayo dalka Spain, laakiin waxaa la isla dhexmarayaa in kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ay indhaha ku hayaan saxiixa xiddigan xulka qaranka Brazil.
Neymar ayaa la warinayaa inuu sheegay inuu jecel yahay inuu markiisii labaad ku qaato kooxda Catalan oo uu dib ugu laabto, warsidaha Gol ayaana sheegaya in 27-sano jirkaan uu haatanba bilaabay inuu guri ka raadsado Magaalada Barcelona.
PSG waxaa laga yaabaa inay u furan tahay qaababka kala duwan oo ay weeraryahankan ku bixin karto, inkastoo aysan caddeeynin haddii ay door-bidi lahaayeen lacag toos ah inay siistaan ama heshiis kasta oo ay ku jiraan in ciyaartooy la is dhaafsado.
Samuel Umtiti, Philippe Coutinho iyo Ousmane Dembele ayaa dhammaantood la la xiriirinayey inay dhici karto in u wareegaan Caasimadda Faransiiska.
Juventus oo dharbaaxo xoogan la damacsan kooxaha Arsenal, Tottenham Hotspur iyo AC Milan
Macalin Zidane oo markii ugu horeysay ka hadlay saxiixyada cusub ee kooxda Real Madrid